बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजन के भन्छन् ? – इन्सेक
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजन के भन्छन् ?
पीडित परिवारका सदस्य भागिराम चौधरी
मेरा नाम भागिराम चौधरी हो । मेरा घर धधवार गाविस८ बेलभार हो । दश वर्षेद्वन्द्वका समयमा मेरा दाजुभाउजुलाई नेपाली सेनाले बेपत्ता पारेको छ । अहिलेसम्मउनीहरूको अवस्था अज्ञात छ । दाजुको नाम चैतेराम थारु र भाउजु सीताजानकी थारु हुन् । दुवैलाई तत्कालिनशाही सेनाले ०५९ पुस ५ गते मगरागाडी गाविस-३ जब्दहवाबाट कब्जामा लिएर बेपत्ता गरेको
ब्यक्ति बेपत्ता पारिएपछिको हाम्रो परिवार र समाजमा नकारात्मक प्रभाव त परेको छ नै, समाजबाट समेतअपहेलित हुनु परेको अवस्थाका कारण भविष्यको आधार समेत गुमिरहेको छ । परिवारमा आर्थिक सामाजिककोसाथै साँस्कृतिक समस्याले आधारभुत आवश्यकतामा अप्ठ्यारो भएको कारणले यो समस्या अन्य प्रकारकापीडितहरूको समस्या भन्दा केही फरक रहेको छ । किनकि बेप
त्ता शब्दले अन्यौलताको अर्थ दिन्छ । वास्तविकताथाहा पाउन धेरै खुड्किलो पार गर्नुपर्छ ।
हाम्रा आफन्त बेपत्ता पारिएपछि आमाबाबुहरूमा मानसिक समस्या उत्पन्न भै शारीरिक रुपमा कमजोर र अशक्तबनाइरहेको छ । सहाराविहीन र एक्लोपन महशुस भैरहेको छ । किनकि अकालमा परिवारको सदस्य गुमाउँदाकोपीडा फरक हुने गर्दछ । अब राज्यले बेपत्ता परिवारको लागि दैनिक जीवनका समस्याहरू पूरा गर्नुपर्दछ ।
समाजको विकासक्रम अनुसार हामी पीडित परिवारले प्रर्तिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास र अवसर राज्यलेप्रदान गर्नुपर्छ । पीडितले इमान्दार अभिभावकको रुपमा प्रस्तुत हुनको लागि अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।हाम्रो परिवारमा बदलाको भावना छैन तर दोषीहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्नुपर्छ ।